Revhitiko 20 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hiligaynon Hindi Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Lingala Luganda Luvale Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Norwegian Ossetian Otetela Pangasinan Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Thai Tigrinya Tongan Tsonga Turkish Twi Ukrainian Uzbek Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Genesisi Eksodho Revhitiko Numeri Dheuteronomio Joshua Vatongi Rute 1 Samueri 2 Samueri 1 Madzimambo 2 Madzimambo 1 Makoronike 2 Makoronike Ezra Nehemiya Esteri Jobho Mapisarema Zvirevo Muparidzi Rwiyo rwaSoromoni Isaya Jeremiya Mariro Ezekieri Dhanieri Hosiya Joeri Amosi Obhadhiya Jona Mika Nahumi Habhakuki Zefaniya Hagai Zekariya Maraki Mateu Mako Ruka Johani Mabasa VaRoma 1 VaKorinde 2 VaKorinde VaGaratiya VaEfeso VaFiripi VaKorose 1 VaTesaronika 2 VaTesaronika 1 Timoti 2 Timoti Tito Firimoni VaHebheru Jakobho 1 Petro 2 Petro 1 Johani 2 Johani 3 Johani Judha Zvakazarurwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
20 Zvino Jehovha akataura naMosesi, achiti: 2 “Uti kuvanakomana vaIsraeri, ‘Munhu wose pavanakomana vaIsraeri, uye mutorwa wose anogara pakati paIsraeri, anopa Moreki+ mumwe wevana vake, chokwadi anofanira kuurayiwa. Vanhu vomunyika yacho vanofanira kumutema nematombo kusvikira afa. 3 Ini ndichatarira munhu iyeye ndakatsamwa, uye ndichamuparadza pakati pevanhu vokwake,+ nokuti akapa Moreki vamwe vana vake kuti asvibise nzvimbo yangu tsvene+ uye kuti asvibise zita rangu dzvene.+ 4 Kana vanhu vomunyika yacho vakaita sevasingaoni munhu iyeye paanopa Moreki vana vake, vachirega kumuuraya,+ 5 ini ndichabva ndatarira munhu iyeye pamwe chete nemhuri yake ndakatsamwa,+ uye chokwadi ndichamuparadza pamwe chete nevaya vose vanoita zvounzenza naye pakati pevanhu vokwavo pavanoita unzenza+ naMoreki. 6 “‘Kana uri mweya unotsaukira kumasvikiro+ nevafemberi+ kuti uite unzenza navo, ndichatarira mweya iwoyo ndakatsamwa, ndouparadza pakati pevanhu vokwawo.+ 7 “‘Munofanira kuzvitsvenesa muve vatsvene,+ nokuti ndini Jehovha Mwari wenyu. 8 Munofanira kuchengeta mirau yangu, muiite.+ Ndini Jehovha ari kukutsvenesai.+ 9 “‘Kana pakava nomunhu anotuka baba vake naamai vake,+ chokwadi anofanira kuurayiwa.+ Iye atuka baba vake naamai vake. Ropa rake riri pamusoro pake.+ 10 “‘Zvino murume anoita upombwe nomudzimai womumwe murume ndiye anoita upombwe nomudzimai wowokwake.+ Chokwadi anofanira kuurayiwa, mhombwe yacho pamwe chete nemhombwekadzi yachowo.+ 11 Murume anorara nomudzimai wababa vake afukura baba vake.+ Chokwadi vose vari vaviri vanofanira kuurayiwa. Ropa ravo riri pamusoro pavo. 12 Kana murume akarara nomuroora wake, chokwadi vose vari vaviri vanofanira kuurayiwa.+ Vaita zvinopesana nemasikirwo akaitwa vanhu. Ropa ravo riri pamusoro pavo.+ 13 “‘Zvino kana murume akarara nomunhurume sezvinoita munhu anorara nomukadzi, vose vari vaviri vaita chinhu chinosemesa.+ Chokwadi vanofanira kuurayiwa. Ropa ravo riri pamusoro pavo. 14 “‘Kana murume akatora mukadzi naamai vake, iko kusazvibata.+ Vanofanira kumupisa nomoto,+ iye pamwe chete navo, kuti kusazvibata+ kurege kuramba kuripo pakati penyu. 15 “‘Kana murume akapa mhuka urume hwake,+ chokwadi anofanira kuurayiwa, uye munofanirawo kuuraya mhuka yacho. 16 Kana mukadzi akaswedera pedyo nemhuka chero ipi zvayo kuti akwirwe nayo,+ munofanira kuuraya mukadzi wacho pamwe chete nemhuka yacho. Chokwadi zvinofanira kuurayiwa. Ropa razvo riri pamusoro pazvo. 17 “‘Kana murume akatora hanzvadzi yake, mwanasikana wababa vake kana kuti mwanasikana waamai vake, akaona kusapfeka kwake, uye iyewo akaona kusapfeka kwake, zvinonyadzisa.+ Naizvozvo vanofanira kuparadzwa vanakomana vevanhu vokwavo vachizviona. Murume wacho afukura hanzvadzi yake. Anofanira kuzvidavirira kukanganisa kwake. 18 “‘Kana murume akarara nomukadzi ari kumwedzi, akamufukura, afukura panobva ropa rake, uye mukadzi wacho afukura panobva ropa rake.+ Naizvozvo vose vari vaviri vanofanira kuparadzwa pakati pevanhu vokwavo. 19 “‘Usafukura munun’una waamai vako+ nehanzvadzi yababa vako,+ nokuti unenge wafukura hama yomumba.+ Vanofanira kuzvidavirira kukanganisa kwavo. 20 Murume anorara nomudzimai wababamudiki vake afukura babamudiki vake.+ Vanofanira kuzvidavirira nokuda kwechivi chavo. Vanofanira kufa vasina mwana.+ 21 Kana murume akatora mudzimai womunun’una wake, icho chinhu chinosemesa.+ Afukura munun’una wake. Havafaniri kuva nomwana. 22 “‘Munofanira kuchengeta mirau yangu+ yose nezvandakatonga+ zvose mozviita, kuti nyika yandiri kukuendesai kwairi kuti munogara mairi irege kukurutsai.+ 23 Musafamba nemirau yemarudzi andiri kudzinga pamberi penyu,+ nokuti akaita zvinhu izvi zvose uye ndinoasema.+ 24 Nokudaro ndakati kwamuri:+ “Imi muchatora nyika yavo kuti ive yenyu, uye ini ndichakupai iyo kuti muitore ive yenyu, iyo nyika inoyerera mukaka nouchi.+ Ndini Jehovha Mwari wenyu, akakutsaurai pakati pemamwe marudzi.”+ 25 Munofanira kusiyanisa mhuka dzakachena nedzisina kuchena, shiri dzisina kuchena nedzakachena;+ uye musaita kuti mweya yenyu ive inosemesa+ nemhuka, neshiri uye nechinhu chero chipi zvacho chinofamba panyika, zvandakatsaura nokuda kwenyu pandakazivisa kuti hazvina kuchena. 26 Munofanira kuva vatsvene kwandiri,+ nokuti ini Jehovha ndiri mutsvene;+ uye ndinokutsaurai pakati pemamwe marudzi kuti muve vangu.+ 27 “‘Zvino kana paine murume kana mukadzi ane mudzimu wokusvikirwa kana kuti mudzimu wokufembera,+ chokwadi vanofanira kuurayiwa.+ Vanofanira kuvatema nematombo kusvikira vafa. Ropa ravo riri pamusoro pavo.’”+